विदेशीएका श्रीमानहरूका श्रीमतीको समाचारहरू त हामीले संजालमा छ्यापछ्याप्ती देखिरहेका छौँ,अब पढ्नुहोस् श्रीमान घरमै हुँदा बिग्रेको श्रीमती(भिडियो हेर्नुहोस्) – " कञ्चनजंगा News "
विदेशीएका श्रीमानहरूका श्रीमतीको समाचारहरू त हामीले संजालमा छ्यापछ्याप्ती देखिरहेका छौँ,अब पढ्नुहोस् श्रीमान घरमै हुँदा बिग्रेको श्रीमती(भिडियो हेर्नुहोस्)
No Comments on विदेशीएका श्रीमानहरूका श्रीमतीको समाचारहरू त हामीले संजालमा छ्यापछ्याप्ती देखिरहेका छौँ,अब पढ्नुहोस् श्रीमान घरमै हुँदा बिग्रेको श्रीमती(भिडियो हेर्नुहोस्)
वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रीमानहरुका श्रीमतीहरु श्रीमान घरमा नहुदाँ कामाएको सबै लिएर अर्कैसगँ हिडेको घटना हामिले थुप्रै देख्दै आएका छौ। तर अहिले त्यो भन्दा घटना मिडियामा आएको छ । इलाममा एक महिलाले श्रीमान घरमा साथै हुँदा अर्कै केटासँग भागेकि छिन । श्रीमान साथमा हुदाँ नै घरमा साथी भन्दै अर्कै केटा ल्याउने गरेको खुलेको छ । तिनै साथै भन्दै घरमा आएको ब्याक्तीले श्रीमतिलाई लिएर गएको उनका श्रीमानले बताएका छन ।
तर ती श्रीमती लिएर फरार हुने ब्याक्तीले पनि पहिले बिबाह गरेको खुल्न आएको छ । उनले एक मात्र होइन थुप्रैलाई केही समय बिबाह गरेको नाटक गरेर छोड्ने गरेको खुलेको छ । घरमा राम्रै सम्बन्ध रहेको अवस्थामा पनि श्रीमति अर्कैसगँ गएको भन्दै उनका श्रीमान मिडिया आएका हुन । सामान्य किराना पसल र कृषि फार्म खोलेर त्यसमै कान गर्दै आएका उनी श्रीमति त्यसरी अर्कैसगँ हिडे पछि आफू श्रीमति खोज्न तिर लाग्दा आफ्नो ब्यावसाय पनि अहिले डुब्दै गएको बताए ।
उता श्रीमति भगाएर लगेका ब्याक्तीकि पहिलेकी श्रीमतिले भने आफुलाई पनि त्यसरी नै झुटो बोलेर बिबाह गरि छोरी भए पछि छोडेर हिडेको बताएकी छिन । आफू उक्त ब्याक्तिसगँ बिबाह गरेर गए पछि बुझ्दै जादाँ उनकी जेठी श्रीमती पनि रहेको आफुले बुझेको उनको भनाई थियो । ती ब्याक्तिले जेठी श्रीमतिलाई बिदेश पठाएर आफुलाई बिबाह गरेको आफुले पछि थाहा पाएको उनले बताईन । बिदेशमा रहेकी श्रीमतिले पनि कान्छी बिबाह गरेको थाहा पाए पछि उनलाई पैसा पठाउन बन्द गरेको उनले बताईन ।
त्यसरी बिदेशमा रहेकी श्रीमतिले पैसा पठाउन छोडे पछि उनले आफुले कान्छीलाई छोडी सकेको भन्दै पुन पैसा पठाई माग्न थालेकी तर उनी भने आफू सगै रहेको उनले बताईन । आफुले त्यो सब थाहा पाए पछि त्यही कुरामा बिबाद गरि छोडेर गएको उनको भनाई थियो । त्यति मात्र नभै उनी त्यसरी नै थुप्रै महिलाहरुसगँ बोल्ने गरेको र उनिहरुलाई पनि त्यसरी नै फसाउने गरेको आफुले थाहा पाएर ३/४ केटिहरुलाई आफुले नै भेटेर उनको बारेमा बताएको पनि उनको भनाई छ ।
तर आफुले सबै कुरा बन्दा पनि उनिहरुले कुनै वास्था नगरी त्यहीसगँ बोलेको उनको भनाई छ । ती ब्याक्ती त्यसरी नै थुप्रै महिलाहरुलाई बिबाहको केही दिन नटक गरि सगै बस्ने र कतिपय सोझा सिधा महिलाहरुलाई बिदेश पठाउने तथा नेपालमै कतै काम गर्न लगाएर आफुले उनिहरुबाट पैसा लिएर हिड्ने गरेको बताएकी छिन । कतिपयलाई त यौनधन्दामा पनि लगाउने गरेको उनले बताएकी छिन । त्यसैले ती ब्याक्तिलाई खोजी गरि कानुनी दायरामा नल्याए थुप्रै महिलाको जिन्दगी बर्बाद बनाउने उनको भनाई थियो ।
← तिहारमा ढुक्क भएर झिलिमिली गर्नुहाेस् : कुलमान घिसिङ → कसरी स’म्प’र्क गर्दा बच्चा बस्छ, बाँ’झोप’नाबाट कसरी बच्ने ? डा. सबिना सिम्खडाको सुझाब हेरौ यो कुराकानी..